मध्यरात | मझेरी डट कम
gita thapa — Thu, 11/29/2012 - 22:19
"साहित्य चिन्दैनन् बेवकुफहरू । कति दिमाग लगाएर लेख्यो । यो भएन । त्यो भएन । जस दिनु त कता हो कता । खालि अपजसको भारि मात्रै बोकाउँछन् । युवतीको नाङगो तस्वीर देख्नुहुन्न । वा ! क्या छ छ नि हौ । तारिफको पूल बाँधेर अघाउँदैनन् ।"
लोग्नेले फलाकेका ती शब्द गएर खाटको एक छेउमा सुतिरहेकी स्वास्नीका कानमा ठोक्किए । रातको बाह्र अघिनै बजिसकेको थियो । स्वास्नी सिरक पाखा लगाएर आँखा मिच्दै जुरुक्क उठी । हृदयमा उम्रेका शब्द निकाली "ए बुढा ! यो मध्यरात भुतले खाजा खाने बेलामा कसलाई बेवकुफ र सेवकुफ भनेर सराप्दैछौ हँ ? तिम्रा किचुली परेका आँखामा निद्रा किन नआको ? तिम्रो यो कम्पुटेरको टीलो टिपेर ढोकाबाट बाहिर पुग्नेगरि घुँयत्रो हानुँ कि खुरुक्क निभाएर सुत्छौ ? अर्काको दुई चार बात सहन नसक्नेले त नलेख्नु नि । कति पटक भनें बरु ईश्वरको नाम जप पार तरिन्छ भनेर ? मेरा कुरा एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले फुस्स उडाइदियो । न सयममा खाको छ । न सुतेको छ समयमा । न अर्कालाई आनन्दले सुत्न देको छ । कमिलाले खुँदो पाए झैँ दिन रात त्यसैमा झुन्डिएको छ । छ । लु अहिले भन, यो लेख्ने काम छोड्छौ कि म तिमीलाई यो घरमा एक्लै छाडेर देवघाटतिर गएर बसुँ ? तिमी एउटाले नलेख्दैमा न आकाश खस्छ । न धरती भासिन्छ ।"
मध्यरात स्वास्नीले र्‍याखर्‍याख्ती पारेपछि ऊ कनेर बोल्यो "अब लेख्न छोडिदिन्छु । चुप लागेर सुत । "
"साँच्चै भन ।"
"के चोरलाई झैँ र्‍याखर्‍याख्ती पार्छेस् है गाँठे । तँलाई विस्वास दिलाउन के यो मध्यरातमा तामा तुलसी छुनुपर्‍यो मैले अब ?"
"मैले त्यसो भने र ?" स्वास्नीको प्रश्न वाचक चिन्ह ठडिएपछि भने ऊ यो मध्यरातमा झगडा लम्व्याउन चाहदैनथ्यो। त्यसैले चुपचाप कम्प्युटर थन्क्यायो । र स्वास्नीको छेउमा कोल्टे परेर पल्टियो ।
बिहान स्वास्नी उठेर भान्सातिर लागी । बुढाबुढी कुम जोडेर खाउँला भन्ने सोच्दै दुई गिलास चिया बोकेर कोठामा पसी ।
लोग्ने अघि उठिवरी नाकको डाँडीमा पावरवाला चस्मा अड्याएर । चुरोटको धुवाले पहेंलिएका जुँघा हल्लाउँदै युनिकोडको सेतो भित्तोमा काला अक्षर रोप्न मस्त देखिन्थ्यो । स्वास्नी यस्ता थेत्तरा बुढालाई बिहान बिहानै कराएर आफ्नो मुख व्यर्थै के दुखाउँनु भन्ने ठानी । छेउको टेबुलमा बुढाको भाग एक गिलास चिया राखिदिएर आफू भने भान्सातिरै फर्की ।